Kedu mba ị nwere ike ịzụta iPhone X ọhụrụ na ọnụ ahịa ahịa? | Akụkọ akụrụngwa
Kedu mba ị nwere ike ịzụta iPhone X ọhụrụ na ọnụ ahịa ahịa?
The iPhone X bụ ugbu a ukara mgbe a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ntapu na asịrị na-eme na-adịbeghị anya ọnwa. O di nwute na anyi agaghi enwe ike idobe ya rue mgbe October 27 na abia abia ma anyi agaghi enwe ike idowe ya n’aka anyi rue mgbe ubochi ole na ole gasiri. Ọbịbịa ahụ ka ga-adị ogologo ka anyị nwee ike iji ohere jụọ onwe anyị; Kedu mba ị nwere ike ịzụta iPhone X ọhụrụ na ọnụ ahịa ahịa?.
Na Spain ọnụahịa nke iPhone X ọhụrụ ahụ ga-abụ euro 1.159 maka ụdị 64 GB na 1.329 euro maka ụdị ahụ na 256 GB nke nchekwa dị n'ime. Agbanyeghị, ọnụahịa ndị a ahaghị nhatanha na mba niile, na ụfọdụ oge ha nwere ike ịdị iche iche nke ukwuu.
Na-elekwasị anya n'ajụjụ a na-enye aha isiokwu a, Anyị nwere ike ịgwa gị na ọ nweghị mba ụwa anyị nwere ike ịzụta iPhone X ọhụrụ na ọnụ ahịa mmeri, ma na-ebelata dị ịrịba ama. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị gaa ezumike na United States, na kpọmkwem n'obodo Chicago, anyị nwere ike ịnweta ọdụ ọhụrụ Apple na mbelata ọnụahịa nke euro 273.
Lee, anyị gosiri gị ọnụahịa nke iPhone X ọhụrụ ga-enwe n'ọtụtụ mba ụwa;
Ọnụ ego na euro
USA (Niu Yọk) 908
N'iburu data ndị a, anyị nwere ike ịchekwa ezigbo ego euro site na ịzụta iPhone X ọhụrụ na mba ma ọ bụ ọzọ. na Switzerland ma ọ bụ Japan ma gaa ahịa.
Ì chere na ọ bara uru ịzụta iPhone X ọhụrụ ahụ na mba ndị ọzọ na ihe niile nke a pụtara?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Kedu mba ị nwere ike ịzụta iPhone X ọhụrụ na ọnụ ahịa ahịa?
Echere m na ị kwesịrị igosi na nkwa ahụ na-arụ ọrụ maka ebe ị zụrụ iPhone, ya bụ, ọ bụrụ na ịzụta ya na US, nkwa ahụ anaghị arụ ọrụ na Spain
Zaghachi Juan Fco
Armand na-eri dijo
Zaghachi ka Armand Na-efu
Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ WhatsApp nke ejiri zuo data gị
Acer Apire S24, thinnest All-in-Otu na ahịa